United Nations – Free Expression Myanmar
FEM has submittedareport to the United Nations Special Rapporteur on freedom of assembly and association documenting the post-coup funding of CSOs in Myanmar. The report covers Myanmar’s association regulations, their effect on fundraising, and the military’s crackdown on CSO funding. It also highlights
Mar 07, 2022 by Coordinator in News သတင်း
Feminist lens on free expression
FEM isafeminist organisation and has consistently worked to better understand how women and free expression interact. In 2019 we published the report Daring to Defy Myanmar’s Patriarchy. In 2021, we submitted the following report toafeminist consultation with the UN Special Rapporteur
Jul 21, 2021 by Coordinator in News သတင်း
ကျွန်ုပ်တို့ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် မြန်မာပြည်ရှိ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ၏ နှုတ်ဆိတ်မှုအပေါ် ပြင်းပြင်းထန်ထန် စိုးရိမ်လျှက်ရှိပြီး ယင်းအဖွဲ့အစည်းမှ အကြီးအကဲများအား လက်ရှိမြန်မာပြည်၏ အခြေ အနေအပေါ် အသံထုတ်ပေးရန်နှင့် အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်ရန် တိုက်တွန်းလိုက်သည်။ မြန်မာပြည်အတွင်း လည်ပတ်ဆောင်ရွက်နေသော ကုလသမဂ္ဂ၏အစီအစဉ်များ၊ အေဂျင်စီများ၊ နှင့် ဌာနဆိုင်ရာ များ အရေအတွက်ပေါင်း (၂၀) ရှိသည့် အနက် (၅) ခုမျှကသာ စစ်အာဏာသိမ်းမှုအပေါ် တရားဝင် သဘောထားမှတ်ချက်များ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ၄င်းတို့ (၅) ခုအနက် အဖွဲ့အစည်း (၄) ခု သည် ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူ များအပေါ် အလွန်အကြူး အင်အားသုံးဖြိုခွဲမှုအား ရှုတ်ချခဲ့ကြ၍၊
Mar 12, 2021 by Coordinator in News သတင်း
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် “ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအားလုံး၏ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေကို ပုံမှန်သုံးသပ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်” အတွက် လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှု ငါးနှစ်တာသုံးသပ်ချက်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှုသည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့တွင် (၁၀) နှစ် ပြည့် မည်ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်တွင် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပွင့်လင်းသည့် ပထမဆုံး အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို ကျင်းပပြီးနောက် အရပ်သားအမည်ခံ USDP အစိုးရ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ နောက်ငါးနှစ်အကြာ၌ ကျင်းပသည့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ NLD အစိုးရ ပြန်လည်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး ယခုနှစ်မှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံ၏ တတိယမြောက် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို ကျင်းပတော့မည် ဖြစ်သည်။ ထို ၁၀ နှစ်ကာလ တစ်လျှောက်တွင်
Aug 28, 2020 by Coordinator in Publications ထုတ်ဝေစာများ
Joint submissions to the Universal Periodic Review
In 2020, FEM submittedashadow report to the Universal Period Review (UPR) and partnered in four joint submissions too. Joint submissions: FEM and Access Now (PDF) FEM, Article 19, and national partners (PDF) FEM, Civicus, and ADN (PDF) FEM and national partners (PDF) More
Jul 13, 2020 by Coordinator in News သတင်း
Submission to Myanmar Universal Periodic Review 2020 (UPR)
Free Expression Myanmar (FEM) Submission to the UN Human Rights Council on the Universal Periodic Review 2020 Third Cycle for Myanmar6July 2020 Introduction This submission will focus on FEM’s expertise on FoEI in Myanmar. It will assess implementation of previous UPR recommendations, including
Jul 06, 2020 by Coordinator in Publications ထုတ်ဝေစာများ